ကုန်ပစ္စည်း Parameters ကုန်ပစ္စည်းအမည်လက်ကားစျေးပေါသောကြော့အဖြူခေါက်နိုင်သောအဖုံးအုပ်ထားသောစက္ကူအဖုံးနှင့်အခြေခံသေတ္တာပစ္စည်းအဖုံးအုပ်ထားသောစက္ကူ, အနုပညာစက္ကူ, kraft စက္ကူ, မီးခိုးရောင်ဘုတ်, မြှောင်းပုံစက္ကူ, အထည် -line ကိုစက္ကူ, စက္ကူဘုတ်, သတ္တုပါးစက္ကူ, ငွေကဒ်စက္ကူ, ရွှေကဒ်စက္ကူ, ပုလဲစက္ကူ, အထူးစက္ကူ, အနက်ရောင်ကဒ်စက္ကူ, ပြန်လည်အသုံးပြုသောပစ္စည်းသို့မဟုတ်အခြားမီးခိုးရောင်…
စက်ရုံဈေးကတ်ထူပြားကတ်ထူအချောထုပ်ပိုးအတွက် Gift Box အတွက် 12 သင့်ကိုယ်ပိုင်လိုဂိုနှင့်အတူချောကလက်
ကျနော်တို့မှာပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုပ်ပိုးဒီဇိုင်းဌာနရှိသည် , Professional ထုပ်ပိုးဒီဇိုင်နာသည်သေတ္တာများ (သို့) အိတ်များပေါ်တွင်အရောင်ကိုပုံနှိပ်ရာတွင်အလွန်ကောင်းမွန်ပြီးအမှားကိုလျှော့ချပေးလိမ့်မည်. ပစ္စည်း: စက်ရုံဈေးကတ်ထူပြားကတ်ထူအချောထုပ်ပိုးအတွက် Gift Box အတွက် 12 သင့်ကိုယ်ပိုင်လိုဂိုနှင့်အတူချောကလက်: က) ဆင်စွယ်ဘုတ်(အဖြူရောင်ကတ်ထူပြား) ခ) အနုပညာစက္ကူ(စက္ကူ coated)/Matte အနုပညာစက္ကူက c) နောက်ကျောအဖြူ / မီးခိုးရောင်နှင့်အတူ Duplex ဘုတ်အဖွဲ့)မီးခိုးရောင်ဘုတ်အဖွဲ့င) Kraft စက္ကူ(စာရွက်စာတန်း) f) ပြန်လည်အသုံးပြုစက္ကူ g) သင့်ရဲ့တောင်းဆိုချက်ကိုအဖြစ်မဆိုပစ္စည်း. Surface ပုံနှိပ်ခြင်း:…
စိတ်ကြိုက် CMYK စက္ကူသေတ္တာအနက်ရောင် mens အတွင်းခံအဝတ်အစားထုပ်ပိုးပုံး
ကောင်းမွန်သောထုတ်ကုန်သည်အကောင်းဆုံးထုပ်ပိုးဒီဇိုင်းကိုလိုအပ်။ ၎င်းကိုထင်ရှားစေရန်ကူညီသည်, ကျွန်ုပ်တို့သည်ရှေ့တန်းလမ်းကြောင်းကိုဖမ်းယူနိုင်ပြီးအယူအဆတစ်ခုမှမျက်စိစွဲမှတ်စေသောထုပ်ပိုးဒီဇိုင်းကိုဖန်တီးနိုင်သည်. ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းအမည် Custom CMYK စက္ကူသေတ္တာအနက်ရောင် mens အတွင်းခံအဝတ်အစားထုပ်ပိုးကုန်ကြမ်းအတွက်လက်ကားကုန်ကြမ်းစက္ကူ, အနုပညာစက္ကူ, kraft စက္ကူ, မီးခိုးရောင်ဘုတ်, မြှောင်းပုံစက္ကူ,…